Edere site Tranquillus | Feb 2, 2022 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Oge ọrụ iwu kwadoro na France bụ awa 35 kwa izu. Maka mgbanwe ndị ọzọ na mgbe ụfọdụ ịzaghachi akwụkwọ iwu na-arịwanye elu, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ịmalite oge ọrụ ma na nke a, ha ga-akwụ ụgwọ ha.
Gịnị mere na-arụ ọrụ karịa oge ?
N'afọ 2007, iji nyere aka melite ikike ịzụrụ ndị ọrụ, a kwadoro iwu (TEPA law - Labor Employment Purchasing Power) iji kwado ma ụlọ ọrụ na ndị ọrụ. Maka ụlọ ọrụ, ọ bụ ajụjụ nke ibelata ụgwọ ndị ọrụ na maka ndị ọrụ, ọ bụ ajụjụ nke ibelata ụgwọ ọrụ, kamakwa ịhapụ ha n'ụtụ isi.
Ya mere, ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ kasị elu na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịrịọ ndị ọrụ ya ka ha na-arụ ọrụ karịa ya mere ka ha rụọ ọrụ oge. Mana enwere ike ịrịọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ọrụ ngwa ngwa (nrụzi akụrụngwa ma ọ bụ ụlọ). Achọrọ ka ndị ọrụ nabata belụsọ maka ezi ihe kpatara ya.
Ya mere, ndị a bụ awa ọrụ rụrụ gafere oge ọrụ iwu kwadoro, ya bụ, ihe karịrị awa iri atọ na ise. N'ụkpụrụ, onye ọrụ enweghị ike ịrụ ọrụ karịa 35 awa ọrụ kwa afọ. Mana ọ bụ nkwekọrịta mkpokọta gị ga-enwe ike ịnye gị ọnụ ọgụgụ ziri ezi.
Kedu ka esi eme mgbako ?
Ọnụego mmụba maka oge gafere bụ 25% site na 36e awa na ruo 43e oge. Mgbe ahụ ọ na-abawanye site na 50% nke 44e awa na 48e oge.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na nkwekọrịta ọrụ gị kwuru na ị ga-arụ ọrụ awa 39 n'izu, oge ọrụ ga-amalite site na 40.e oge.
Nkwekọrịta mkpokọta gị nwere ike ịnye ụzọ ị ga-esi kwụọ ụgwọ maka oge ọfe ndị a, mana n'ozuzu ndị a bụ ọnụego na-emetụta. Nke a bụ ya mere ọ dị mkpa ka ị mara nkwekọrịta mkpokọta nke ụlọ ọrụ gị nke ọma iji mara nke ọma ma ikike gị na ọrụ gị.
Enwere ike ịkwụ ụgwọ awa ọrụ ngafe ndị a site na ezumike nkwụghachi ụgwọ kama ịkwụ ụgwọ. N'okwu a, ogologo oge ga-adị ka ndị a:
1 hour nkeji 15 maka awa ruru 25%
1 hour nkeji 30 maka awa ruru 50%
Kemgbe 1er Jenụwarị 2019, a naghị atụ ụtụ isi na-arụ ọrụ oge karịa ihe ruru euro 5. Ekwesiri ighota na n'ihi oria ojoo nke COVID 000, oke ya bu 19 euro maka afo 7.
Maka ndị ọrụ nwa oge
Maka ndị na-arụ ọrụ nwa oge, anyị agaghị ekwu maka oge ọrụ (nke ejikọtara na oge ọrụ iwu kwadoro), mana nke oge ọrụ (nke ejikọtara na nkwekọrịta ọrụ).
Oge awa ọzọ ga-amalite site na oge enyere na nkwekọrịta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọrụ na-arụ ọrụ awa 28 kwa izu, a ga-agụta awa ọzọ ya site na 29e oge.
Mkpa obere nkọwa
Ọ dị mkpa ịgbakwunye obere nkọwa maka ndị na-agbakọ ọnụ ọgụgụ nke oge ọrụ. N'ihi na ngụkọta oge a na-eme kwa izu. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ nke na-erite uru na nkwekọrịta awa 35 na onye ga-arụ ọrụ awa 39 n'ime otu izu n'ihi oke ọrụ na onye, ​​​​n'izu na-esote, ga-arụ ọrụ awa 31 n'ihi enweghị ọrụ ga-erite uru mgbe niile na 4 ya. mgbakwunye awa. Ya mere, a ga-abawanye ha ruo 25%.
GỤỌ Nkwụghachi ụgwọ na ezumike ọmụmụ
Ọ gwụla ma, n'ezie, enwere nkwekọrịta n'etiti akụkụ abụọ ahụ.
N'ikpeazụ, ekwesiri iburu n'uche na ego ego ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ adịghị etinye na ngụkọ nke oge ọrụ.
Ogologo oge ole ka onye njikwa ụlọ ọrụ ga-agwa onye ọrụ ka ọ rụọ ọrụ oge? ?
Dị ka ọ na-adịkarị, a na-ewepụta oge njedebe na ụbọchị 7 site na koodu ọrụ iji dọọ onye ọrụ aka na ntị na ọ ga-arụ ọrụ oge. Ma n'ọnọdụ mberede, oge a nwere ike ibelata. Ụlọ ọrụ ahụ na-enwe mgbe ụfọdụ ihe dị mkpa nke nkeji ikpeazụ.
Ọrụ nke ịrụ ọrụ karịa oge
Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịnara oge ọrụ n'ọkwa ndị a. Onye were ya n'ọrụ nwere ike ịmanye ha n'enweghị usoro ọ bụla. Uru a na-enye ya ụfọdụ mgbanwe na njikwa azụmahịa ya. Ọ bụrụ na enweghị ezigbo ihe kpatara ya, onye ọrụ ahụ na-ekpughere onwe ya na mmachi nke nwere ike ịga n'ịchụpụ maka ajọ omume ọjọọ, ma ọ bụ ọbụna n'ihi ezi ihe kpatara ya.
Overtime na interns
Ebumnobi nke internship ịbụ agụmakwụkwọ, a na-ahụta na onye na-eto eto anaghị arụ ọrụ oge ọrụ.
Oge ngafe na-emetụta onye ọ bụla ?
Oge ngafe anaghị emetụta ụfọdụ ngalaba nke ndị ọrụ, dịka:
Ndị na-elekọta ụmụaka
Ndị na-ere ahịa (usoro ha anaghị enyocha ma ọ bụ nwee ike ịchịkwa)
Ndị njikwa ụgwọ ọnwa ndị na-ewepụta oge nke ha
Ndị ọrụ ụlọ
Ndị na-elekọta ụlọ
Ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na ụbọchị ịdị n'otu adịghị abanye na ngụkọta oge ọrụ.
Ka oge ngafe na-arụ ọrụ Abụọ February 2, 2022Tranquillus
gara agaKedu ka ezumike akwụ ụgwọ si arụ ọrụ?
-esonụSaịtị ọhụrụ iji kwado ngagharị na ịnweta ọrụ